Suudaan iyo Masar oo si wadajir ah u bilaabay dhoolatus militeri - Awdinle Online
Suudaan iyo Masar oo si wadajir ah u bilaabay dhoolatus militeri
Suudaan iyo Masar ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay bilaabay dhoola tus oo ay si wadajir ah u sameynayaan ciidammada labada dal kaas oo loogu magac daray ‘The Nile Eagles 1’, wuxuuna ka bilowday saldhigga ciidamada cirka ee ku yaalla waqooyiga Suudaan.
Dhoolatuskan ayaa socon doonaa tan 26-da bisha Nofembar.
Waa dhoolatuskii dhanka militeriga ahaa ee ugu horreeyay oo ay si wadajir ah u soo bandhigaan labadan dal tan iyo markii uu xilka Suudaan hayay toddobaatamaadkii madaxweynihii hore, Jacfar Al Numeyri.
“Dhoolatuska si wadajirka ah ay ciidamada cirka labada dal ay u sameynayaan waxaa lagu soo bandhigayaa waxyaabo dhowr ah sida qorsheyaal iyo maamulidda ciidamada cirka labada dal, duqeymaha iyo howlgallada difaaca ah ee loo adeegsanayo iskaashiga dhanka ah diyaaradaha dagaalka labada dal, sidoo kale, ciidamada cirka waxay sameynayaan dhoolatus dhanka baadi goobka iyo badbaadinta” waxaa sidaas yiri afahayeen u hadlay ciidamada Masar, sida laga soo xigtay bayaan soo baxay/.
Taliyeyaasha ciidamada Suudaan iyo Masar ayaa Khartuum ku kulmay 31-kii bishii Oktoobar, waxayna ku heshiiyeen in la xoojiyo iskaashiga dhanka militeriga.
Dhoolatuska ay sameynayaan labada dal ayaa imaanayaa xilli Suudaan, Masar iyo Itoobiya ay ku guuldareysteen inay yeeshaan wadahadallada lagu xallinayo muranka ka dhashay biyo xireenta Itoobiya ay ka dhiseyso webiga Nile.
Sidoo kale, wuxuu kusoo beegmayaa xilli Itoobiya ay dagaal kula jirto ciidamada Tigray.
Horraantii bishii Oktoobar, Itoobiya waxay mamnuucday in diyaaradaha ay dul maraan hawada biyo xireenka.
Muranka ka dhashay biyo xireenka ayaa saameyn ku reebay xiriirka saddexdan dal.
Previous articleMaamulka G/Banaadir oo digniin ka soo saarey Xoolaha lagu soo daayo Wadooyinka
Next articleAskar ku dagaalantay Gudaha Madaxtooyada & khasaaro ka dhashay
Joe Biden oo ku dhawaaqay Go’aano saameynaya Soomaalida
RW Rooble iyo Cali Guudlaawe oo kulan xasaasi ah yeeshay
Deni oo farriin hanjabaad ah u diray dadka Facebook waxaa kulmay qora
Xildhibaan sheegay in dowladda Farmaajo beegsaneyso Saraakiil Hal Beel ah
Al-Shabaab oo War kasoo saaray weerarkii Guddoomiyaha Shabeellaha Hoose & Saraakiisha Ciidamada
Qoor Qoor oo lagu Eedeeyay in uu ku fashilmay Amniga deegaannada Galmudug
Weerar jidgal ah oo lagu qaaday Kolonyo uu la socday Guddoomiyaha Shabeellaha Hoose
Laftagareen oo Hal arrin kala hadlay Maamulka Gobolka Bakool